रासायनिक मल अभाव हुँदा चितवनका किसान समस्यामा - Kantipath.com
चितवन । चितवनमा रासायनिक मलको अभाव हुँदा किसानहरु समस्यामा परेका छन् । चितवनका किसानहरु धानमा मल छर्ने बेलामा युरीया मलको अभाव भएपछि समस्यामा परेका छन् ।
जिल्लामा पर्याप्त मात्रामा रासायनिक मल नभएपछि कृषकहरु समस्यामा परेका हुन् । रासायनिक मलको आपूर्ती र बिक्री वितरण गर्दै आएका कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले भारतमा निर्वाचन भएकाले मल अभाव भएको बताएको छ ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड चितवनका अनुसार युरीया मलको अभाव भएको तर, डिएपी र पोट्रास उपलव्ध रहेको जनाएको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड चितवनका प्रवन्धक रविन्द्र गौतमका अनुसार चितवनमा मात्र नभई देशैभर युरीया मलको अभाव देखिएको छ ।
गौतमले चितवनमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड मार्फत एक हप्ताभित्र मल आउने र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड मार्फत पन्ध्र दिन लाग्ने छ । जिल्लामा तत्काल करिव ५ सय मेट्रिक टन युरीया मल आवश्यक रहेको गौतमले बताउनुभयो ।
Previous Previous post: तीनजुरे मिल्के जलजले क्षेत्र संरक्षणका लागि समुदायलाई जिम्मा दिने पहल सुरु
Next Next post: हनुमान मन्दिरको साढे एघार बिघा जग्गा भुमाफियाको कब्जामा
जेठ महिनाको मध्यदेखि तातोपानी नाका सञ्चालनमा आउने
आजको विनिमय दर के छ ? ३२ जेठ, २०७६ – शनिवार
बिद्युत महसुल घट्ने – नाफामुखी हैन सेवामुखी बन्न आयोगको सुझाब !
प्रदेश १ को कुल बजेट ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ (पूर्णपाठ)